MPT Money မှ ဒီဂျစ်တယ် ငွေပေးချေမှု ဝန်ဆောင်မှုကို စတင်မိတ်ဆက် | Myanmar Business Today
HomeBusinessMPT Money မှ ဒီဂျစ်တယ် ငွေပေးချေမှု ဝန်ဆောင်မှုကို စတင်မိတ်ဆက်
MPT Money မှ ဒီဂျစ်တယ် ငွေပေးချေမှု ဝန်ဆောင်မှုကို စတင်မိတ်ဆက်
ဒီဂျစ်တယ် ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည့် MPT Money သည် မိုဘိုင်းဖုန်းမှတစ်ဆင့် မြန်ဆန်၊ လွယ်ကူ စိတ်ချရသော ငွေသားကိုင်တွယ်သုံးစွဲဖို့မလိုသည့် “ဒီဂျစ်တယ် ငွေပေးချေမှု”’ ဝန်ဆောင်မှုကို စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် (COVID-19) ရောဂါဖြစ်ပွားနေမှု အခြေအနေကြောင့် မိမိတို့နေအိမ်မှပင် ငွေပေးချေမှုများကို လွယ်ကူလျင်မြန်စွာနှင့် လုံခြုံစွာ ပြုလုပ်နိုင်စေရန် ရည်ရွယ်၍ အဆိုပါဝန်ဆောင်မှုအသစ်ကို မိတ်ဆက်ခြင်းဖြစ်သည်။
“ဒီဂျစ်တယ်ငွေပေးချေမှု” ဝန်ဆောင်မှု အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် နိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိ မြို့နယ်ပေါင်း ၂၈၀ ကျော်မှ ကိုယ်စားလှယ်ဆိုင်ပေါင်း ၂၇,၀၀၀ ကျော်ရှိသည့် ကိုယ်စားလှယ်ကွန်ရက်မှတစ်ဆင့် Mobile Wallet ဝန်ဆောင်မှု၊ ငွေလွှဲခြင်း၊ ဖုန်းဘေလ်ဖြည့်ခြင်းနှင့် ဒေတာပက်ကေ့ချ်များ ဝယ်ယူနိုင်ခြင်း၊စျေးဝယ်ရာ၌ ငွေပေးချေနိုင်ခြင်း၊ မိမိအကောင့်ထဲမှ ငွေသားကို MPT Money ကိုယ်စားလှယ်ဆိုင်များနှင့် CB Bank ATM စက်များတွင် ငွေသွင်းငွေထုတ် ပြုလုပ်နိုင်ခြင်း စသည့် ဒီဂျစ်တယ်ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
“အခုလို ခက်ခဲတဲ့အချိန်တွေမှာ ငွေကြေး သုံးစွဲသူတွေရဲ့ ဘဝကို ပိုမိုလွယ်ကူစေဖို့ လုပ်ဆောင်ရ လွယ်ကူပြီး အပြည့်အဝ လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့ “ဒီဂျစ်တယ် ငွေပေးချေမှု” ဝန်ဆောင်မှုကို မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ငွေရေးကြေးရေး ကဏ္ဍမှာ အထောက်အကူပြုနိုင်ဖို့အတွက် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရင်း MPT Money ဟာ သုံးစွဲသူတွေကို အကောင်းဆုံး ဒီဂျစ်တယ် ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှု နဲ့ မိုဘိုင်းလ်ငွေပေးချေမှု အတွေ့အကြုံကောင်းတွေ ပေးအပ်သွားဖို့ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်” ဟု MPT Money ကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ ဖြစ်သူ ဦးခင်မောင်မြင့်က ပြောသည်။
MPT Money အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် MPT ဆင်းမ်ကတ်များကို ငွေဖြည့်သွင်းရာတွင် ပြန်အမ်းငွေ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း နှင့် အခြားဆင်းမ်ကတ်များကို ငွေဖြည့်သွင်း ရာတွင် ပြန်အမ်းငွေ ၃ ရာခိုင်နှုန်းကို E-money အဖြစ် (သတ်မှတ်ထားသည့်ပမာဏအတွင်း) မေလ ၃၁ ရက်အထိ ရရှိခံစားနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
ထို့အပြင် စျေးဆိုင်များ၌ ငွေပေးချေမှုပြုလုပ်ရာတွင် တစ်ပတ်လျှင် ၅၀,၀၀၀ ကျပ် အထိ ဝယ်ယူမှုတိုင်းအတွက် ပြန်အမ်းငွေ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းကို MPT Money အသုံးပြုသူများအတွက် မေလ ၃၁ ရက်အထိ ပေးအပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။
MPT, one of the four telecom operators in Myanmar, has announced that its MPT Money unit has introduced its Digital Payment Service to allow users to make instant cashless payments via mobile phones.
As more people are staying home due to the Coronavirus (COVID-19) crisis in Myanmar, this new service aims to help customers make bill payments from the home.
Digital Payment Service users will be able to make payments for various services, subscriptions, and merchants including bill payment for cable TV, internet and adding funds to the Steam Wallet, etc.
MPT Money also offers digital money services such as Mobile Wallet Service, Money Transfer, Airtime e-Top-Up and Data Package Purchases, Merchant Payments, Cash-In & Cash-out at the MPT Money Agents and CB Bank ATMs. Currently, MPT Money is offering services through its Agent Network of more than 27,000 agents located in the 280 towns nationwide.
The MPT Money application is available for mobile users, regardless of the operator. Customers can download the MPT Money Application from the MPT website on Android and iOS users.
Until 31 May, MPT Money users who top up their MPT SIM cards can earna10 percent e-money back where other SIM cards can earna3 percent e-money back. MPT Money customers making payments at participating merchants will receive 10 percent e-money back for every purchase up to MMK 50,000 per week.
Previous articleကုလက ကူညီသည့် COVID-19 စမ်းသပ်ကိရိယာ ၁၀၀၀၀ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိ
Next articleJapan to approve first coronavirus antigen test kits on Wednesday